Madaxweyne Gaas oo Booqday Xarumo la Dayactiray oo Gaalkacyo ku yaal – Radio Daljir
Oktoobar 3, 2015 3:13 b 0
Sabti, Octobar 03, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kormeeray wadooyin muhiim ah oo lagu sameeyey dib u habeyn iyo balaaran , suuqa xera dayax gaar ahaan qeybta ay ka socota dhismaha , Baliga cirjiife, buundada , xarunta madaxtooyada iyo goobo kale oo muhiim ah kuna yaala gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug Puntland.
Madaxweynaha oo ay wehliyeen Wasiiro, xildhibaano, guddiga horumarinta iyo qaabeynta magaalada ayaa ugu horeyn kormeeray wadooyin la habeeyey , lagana dumiyey intooda badan dhismayaal sharci daro ah oo soo galay wadooyinkaasi.
Guddiga horumarinta iyo qaabeynta magaalada oo shaqo wanaagsan ka qabtay Gobalka Mudug ayaa ku guulaystay sidii ay wadooyinkaasi u balaarin lahaayen , iyagoo kaa shanaya shacabka jecel Nabadda iyo Horumarka ee Puntland , waxaa ayna dawladda ula shaqeynayaan shacabku si aan hagrasho laheyn .
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale kormeeray suuqa xera dayax gaar ahaan qeyb cusub oo dhisme ku socda , dawladuna ugu talagashay inay ku ganacsdaan shacabka reer Puntland.
Waxaana uu sidoo kale madaxweynuhu kormeeray xarunta madaxtooyada Dawladda Puntland ee magaalada Gaalkacyo oo ay ka socoto dhisme , lana soo gebagebeeyey aasaaska koowaad ee dhismaha xaruntaasi,
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug waxaa si habsami leh uga soconaya mashaariicda horumarineed ee Dawladda Puntland ugu talagashay, intii uu madaxweynuhu joogeynay waxaa uu ka qabtay shaqo adag oo ay ugu weyn tahay amnigii oo la sugay iyo mashaariicyo horumarineed oo laga daahfuray.
RW Cumar oo BankiMoon kul Shiray New York